China FFP3 Cup Nrụpụta na ụlọ nrụpụta ihe na-eku ume |Shuer
Ikuku ikuku ọ bụla anyị na-eku ume nwere ike ịnwe uzuzu, PM2.5 na ihe ndị ọzọ dị mgbagwoju anya na-emerụ ahụ, mana ịchọghị ịma ha, naanị ị ga-enyefe n'aka ihe mkpuchi anyị.Dabara nchebe akụkụ atọ, ịdị elu dị elu na eriri ntị gbasaa, ihe mkpuchi plastik zoro ezo, ebe ịgbado ọkụ ultrasonic, nkwụsi ike na mgbochi ọdịda, akụkụ anọ, ọ dịghị mfe ịtọpụ ọnụ Dabara nchebe akụkụ atọ, ịdị elu dị elu na eriri ntị gbasaa. , Ihe mkpuchi imi rọba zoro ezo, ultrasonic welding point, ike na mgbochi ọdịda, akụkụ anọ, ọ dịghị mfe ịtọpụ ọnụ Ntị ntị dị mma ma dị nro, ịdị elu dị elu, nrụgide dị ala, ọchịchọ siri ike, ogologo oge na-eyi ume ọ bụla nke ikuku anyị na-eku ume. nwere ike ịnwe uzuzu, PM2.5 na ihe ndị ọzọ dị mgbagwoju anya na-emerụ ahụ, mana ịchọghị ịma ha, naanị ị ga-enyefe n'aka ihe mkpuchi anyị.
1, Nonwoves elu oyi akwa
2 akwa oyi akwa anaghị akpa akwa
3 Agbazekwa oyi akwa nzacha
4 Electrostatic absorption gbazee fụrụ oyi akwa
Igwe anaghị agba nchara n'ime
Q1: Kedu maka oge nnyefe gị?
Dị ka ọ na-adịkarị, ọ ga-ewe 3 ruo 7 ụbọchị mgbe ị nwetasịrị nkwụnye ego Oge nnyefe a kapịrị ọnụ dabere na ihe ndị ahụ na ọnụ ọgụgụ nke iwu gị.
Q2: Ị na-anwale ngwongwo gị niile tupu nnyefe?
Ee, anyị nwere 100% ule tupu nnyefe.
Q3: Kedu otu esi eme ka azụmahịa anyị dị ogologo na mmekọrịta dị mma?
Uru; na anyị na-asọpụrụ onye ahịa ọ bụla dị ka enyi anyị na anyị na-eme ezi obi.
Q4: Ị nwere ike ịnye ihe nlele maka ule?
Ihe nlele efu dị, mana ụgwọ ibu ga-adị na akaụntụ gị, a ga-alaghachikwute gị ma ọ bụ wepụ ya n'usoro gị n'ọdịnihu.
Q5: Anyị nwere ike ịtụkwasị gị obi?
Ee, anyị bụ onye na-emepụta ihe gọọmentị kwadoro (Ndepụta ọcha).
Nke gara aga: Igwe iku ume ụdị FFP2 nwere eriri ọcha
Osote: Ihe mkpuchi ihu FFP2
Ngwaahịa na-ekpo ọkụ - map saịtị - AMP Mobile Ihe mkpuchi PPE, Igwe iku ume FFP2, Ihe mkpuchi ịwa ahụ nke ụlọ ahịa ọgwụ, Ihe mkpuchi China, Ihe mkpuchi ihu, Ihe mkpuchi mkpuchi China,